Israel: Netenyahu oo danjiraha Maraykanka u yeedhay - BBC Somali
Image caption Netenyahu wuxu sheegay in kama dambaysta qaraarkaa laga noqon doono
Ra'isal wasaaraha Israel, Benjamin Netenyahu, ayaa xafiiskiisa ugu yeedhay dan jiraha Maraykanka u fadhiya dalkaas, ka dib markii ay soo baxday xiisad ka dhalatay qaraar Qaramada Midoobay ku dhaleecaysay deegaamaynta laga wada dhulka la haysto ee Daanta Galbeed iyo bariga Quddus.
Israeli-yiintu se gabi ahaan ba way ku gacan saydheen go'aanka waxa aanay rumaysanyihiin in Washington hagratay.
Netenyahu wuxu aaminsanyahay in maamulka Obama si xeeladaysan uga galgashay arrintan oo uu damacsanaa inuu dhirbaaxo diblomaasiyadeed ku dhufto Israel. Ra'isal wasaaruhu wuxu doonayaa in la siiyo tafaasiil dheeraad ah oo wuxu xafiiskiisa ugu yeedhay danjiraha Maraykanka.
Markii horena waxay Israel sidoo kale u yeedhay danjirayaasha dalalka xubnaha ka ah Golaha Ammaanka oo ay ku jiraan kuwa Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka u fadhiya Israel si loogu muujiyo sida ay Israel go'aankaa uga xuntahay.
Natenyahu waxa uu sidoo kale diiradda saaray Qaramada Midoobay waxaanu amar ku bixiyey in dib loo qiimeeyo xidhiidhka ay Israel la leedahay ururka Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa. Durba na way iska caddahay in qaadhaankii ay Israel siin jirtay hay'adaha Qaramada Midoobay la jari doono.